गोर्खा जातिको संवैधानिक, राजनैतिक न्याय साथै चिन्हारीको मुद्दा माथि विचार गोष्ठी - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारगोर्खा जातिको संवैधानिक, राजनैतिक न्याय साथै चिन्हारीको मुद्दा माथि विचार गोष्ठी
February 3, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
कालिम्पोङ गर्ल्स स्कूलको सेन्टेनरी हलमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, कालिम्पोङ जिल्ला समितिले विचार गोष्ठी नाम दिएर एउटा संगोष्ठीको आयोजना गरिरहेको छ। यस गोष्ठी भारतमा गोर्खा जातिको संवैधानिक न्याय अनि राजनैतिक न्याय साथै चिन्हारी अनि अस्तित्वको मुद्दा माथि विचार गोष्ठी रहेको जनाइएको छ।
याद रहोस्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा(विनय खेमा) अध्यक्ष विनय तामाङले भारत नेपाल मैत्री सन्धि १९५० अनि भारत भुटान सन्धि १९४९ का धाराहरू को पुनः अवलोकन हुनु पर्छ अनि भारतका गोर्खाहरुको अस्तित्व अनि चिन्हारी लाई संकटमा ल्याउने धाराहरुमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने माग सूकुना १३ डिसेम्बरको जनसभामा उठाएका थिए।
विनय तामाङले यही मुद्दालाई अघाडि बढाउँदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि बंगालका मुख्य मन्त्री सुश्री ममता बनर्जीलाई यस बारे स्पष्ट पार्दै पत्राचार पनि गरिसकेका छन्।
केही दिन अगाडि विनय तामाङले गोर्खा अस्मिताको आन्दोलनलाई बोद्धिक रूप दिने घोषणा गरे। यस आन्दोलनमा कसैले पनि शहीद बनिनु पर्दैन न त कोही विस्थापित बन्नेछैनन् अनि आन्दोलनमा कसैको घर नजल्ने न त पहाड बन्द गर्नु पर्ने उनको अडान थियो।
त्यसपछि उनले चुनावी राजनीतिबाट आफू अलग रहने कालेबुङबाट घोषणा गरे। विनयको यस घोषणालाई पहाडका राजनैतिक व्यक्तिहरू निकै चासोका साथ हेरिहेका छन् भने कतिले यसलाई चुनावी स्टन्ट मात्र रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।
उनले घोषणा गरेको बौद्धिक आन्दोलनलाई दिशा निर्देश दिन हेतु विनय तामाङले आफ्नै अध्यक्षतामा ९ व्यक्तिहरूको टोली तयार पारेका छन। यस टोलीका सदस्यहरू बौद्धिक समाजसँग जोडिएका भनिएको छ।
‘उनीहरूले यी मुद्दा विषय गहन अध्ययन गर्दैछन। आज आयोजित विचार गोष्ठी मुद्दा विषय भूमिका बाँध्ने गोष्ठी हो। मुद्दालाई जन समक्ष पुर्याउने एउटा जमर्को हो। यो मुद्दा दार्जीलिङ पहाड केन्द्रित मुद्दा नभएर सम्पूर्ण भारत भरी छरिएर बसेका गोर्खाका मुद्दा हुन्’, संगोष्ठी शुरू हुन अगाडि आज कालेबुङमा विनय तामाङले भनेका छन्।
यो मुद्दा चुनावी मुद्दा नभएर गोर्खा अस्मिता बचाउने अभियान रहेको पनि कार्यक्रम बारे जनाइएको छ भने मोर्चा(विनय खेमा)ले मुद्दाको राजनीति अथवा सैद्धान्तिक राजनीति मार्फत माथि भनिएको मुद्दाहरूलाई अगाडि लैजाने अठोट गरेको एक विज्ञप्ती मार्फत बताएको छ।
यस मुद्दालाई पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ स्वयंले नेतृत्व दिनेछन्।
संगोष्ठीको शुरूवातमा चुनावी राजनीतिबाट अलग रहेर गोर्खाहरूको चिन्हारी सङ्कटको लागि प्रतिवद्ध बनेर लड्ने विनय तामाङको ‘ऐतिहासिक’ सङ्कल्पसँग काँध मिलाउने मनसायले कालेबुङ जिल्ला समीतिको तर्फबाट विनय तामाङलाई सम्वर्धना जनाइयो।
त्यसपछि आफ्नो वक्तव्य राख्दै विनय तामाङले भारतीय गोर्खालाई संवैधानिक, राजनैतिक न्याय एवम् राष्ट्रिय चिन्हारी दिलाउन बौद्घिक आन्दोलनको सूत्रपात भएको घोषणा गरेका छन्।
‘विभिन्न सन्धिहरु मार्फत भूभाग सँगै यहाँका रैथाने अनि उपजतीहरुलाई अधिकारबाट किन वञ्चित गरिएको छ? महान भारत देशमा भने गोर्खाले अझसम्म न्याय पाएको छैन। जति जति बेला हामी हाम्रो अधिकार माग्छौ, राजनैतिक न्याय माग्छौ तब तब हामीलाई देशद्रोही, विछिन्नतावादी भनी लान्छना लगाएको छ। भारत स्वाधीन भएको बेला कालिम्पोङमा जन्मेका, हाम्रो जाति को निम्ति लड्ने व्यक्ति आज अर्ध प्रतिमामा सिमित छन। उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गीय डम्बर सिंह गुरुङ। उनैको विचारहरूबाट हामी हाम्रो आन्दोलनको सुरुवात गर्दैछौ,’ संगोष्ठीको शुरूवाती वक्तव्यमा विनय तामाङले भने।
त्यसपछि उनले डम्बरसिंहको एउटा लेखलाई कोट गर्दै भने, “राजनैतिक अधिकार भनी हामी रातदिन कराउँछौ। तर यो के हो धेरै मानिसलाई थाहा छैन। हिन्दुस्तानका मानिसले हामीलाई के भन्छन? यो देशमा हाम्रो कति हक छ? हजारौं गोर्खाहरूले दिएको त्यागको इनाम हामीले के पायौं? पुस्ता पुस्ता देखि हामी रैथाने हौ तरै पनि हामीलाई अल्पसंख्यक मानिएको छैन। हाम्रो यहाँ गन्ती नै छैन। अरु जातिले देशको निम्ति नलडे पनि उनीहरूले हक पाएका छन्। तर हामीलाई खोई? काम नै नगरी धुमधाम कराउनेले सबै कुरा पाएको छ तर हामीले काम मात्र गर्यौं कराउनु जानेनौँ। अब हामीले दाम माग्नु जान्नु पर्छ। कराउनु जान्नु पर्छ। हाम्रो हक पाउनु पर्छ। अरूले हक पाउँछन् भने उस्तै हक हामीले पाउनु पर्छ। यस्ता अन्याय अनि औचित्य नबुझ्ने कुरा धेरै छन। हिन्दुस्तानका सबै गोर्खाले एक आवाजमा कराए हाम्रो आवाज ठीक ठाउँमा पुग्ने छन।”
हाम्रो बौद्धिक आन्दोलनको सूत्रपात यिनै डम्बर सिंह गुरुङको विचार बनोस भन्ने चाहना विनय तामाङले आफ्नो वक्तव्यमा पेस गरे।
आजको संगोष्ठीमा मुद्दाको लागि बनाइएको स्टेयरिङ कमिटीका सदस्यहरू सी के कुमाई, सि डी बान्तवा, गौतम कालिकोटे अनि मिरेन लामाले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्ने बताइएको छ।